PhoenixCoin စျေး - အွန်လိုင်း PXC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို PhoenixCoin (PXC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ PhoenixCoin (PXC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ PhoenixCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ PhoenixCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
PhoenixCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
PhoenixCoinPXC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000542PhoenixCoinPXC သို့ ယူရိုEUR€0.000459PhoenixCoinPXC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000415PhoenixCoinPXC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000493PhoenixCoinPXC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00483PhoenixCoinPXC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00342PhoenixCoinPXC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.012PhoenixCoinPXC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00202PhoenixCoinPXC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.000717PhoenixCoinPXC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.000757PhoenixCoinPXC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.012PhoenixCoinPXC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0042PhoenixCoinPXC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00291PhoenixCoinPXC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0405PhoenixCoinPXC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.0915PhoenixCoinPXC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.000743PhoenixCoinPXC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.000828PhoenixCoinPXC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0168PhoenixCoinPXC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00376PhoenixCoinPXC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.0578PhoenixCoinPXC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.642PhoenixCoinPXC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.21PhoenixCoinPXC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0397PhoenixCoinPXC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0149
PhoenixCoinPXC သို့ BitcoinBTC0.00000005 PhoenixCoinPXC သို့ EthereumETH0.000001 PhoenixCoinPXC သို့ LitecoinLTC0.00001 PhoenixCoinPXC သို့ DigitalCashDASH0.000006 PhoenixCoinPXC သို့ MoneroXMR0.000006 PhoenixCoinPXC သို့ NxtNXT0.0423 PhoenixCoinPXC သို့ Ethereum ClassicETC0.00008 PhoenixCoinPXC သို့ DogecoinDOGE0.156 PhoenixCoinPXC သို့ ZCashZEC0.000007 PhoenixCoinPXC သို့ BitsharesBTS0.0167 PhoenixCoinPXC သို့ DigiByteDGB0.0173 PhoenixCoinPXC သို့ RippleXRP0.00192 PhoenixCoinPXC သို့ BitcoinDarkBTCD0.00002 PhoenixCoinPXC သို့ PeerCoinPPC0.0018 PhoenixCoinPXC သို့ CraigsCoinCRAIG0.247 PhoenixCoinPXC သို့ BitstakeXBS0.0231 PhoenixCoinPXC သို့ PayCoinXPY0.00946 PhoenixCoinPXC သို့ ProsperCoinPRC0.068 PhoenixCoinPXC သို့ YbCoinYBC0.0000003 PhoenixCoinPXC သို့ DarkKushDANK0.174 PhoenixCoinPXC သို့ GiveCoinGIVE1.17 PhoenixCoinPXC သို့ KoboCoinKOBO0.123 PhoenixCoinPXC သို့ DarkTokenDT0.000499 PhoenixCoinPXC သို့ CETUS CoinCETI1.56